Niteraka Fahatezerana Ny Akanjo “Hitler” Nifaninanan’ilay Ankizy Tao Makedonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2018 13:34 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, srpski, 日本語, English
Saripika misy sarin'ankizy manao akanjo araka ny nanoloran'i Hitler ny fifaninanana Mask'n'mall, novaina ny sary mba hanafenana ny endrik'ilay ankizy sy ny mombamomba ny olona nizara / nitia / naneho hevitra.
Azo inoana ho fanararaotra hanandratana marika amin'ny media sosialy izany: Nampiantrano fifaninanana maskarady (fanovana endrika) ho an'ny ankizy ny tranombarotra iray tao Skopje, Makedonia ho fankalazana ny Fetin'ny Lainga 1 Aprily, ka nampidirin'ny ray aman-dreny tanaty aterineto ny sarin'ireo zanany manao akanjo ambony ambany ary amin'ny alalan'ny isan'ny “tia” no hamaritana izay ho mpandresy. Karatra, fanamafisam-pep Bluetooth, sy vilia kely misy sary printy ao anatiny no loka amin'izany.
Inona no mety ho olana?
Na dia izany aza, namoaka sarina ankizilahy kely mitafy fanamiana mainty Nazi namboarina tany an-trano, miaraka amin'ny fehin-tanana swastika ary endrim-bolo sy volom-bava mitovy amin'i Adolf Hitler ny fifaninanana “Mask'n'mall”.
Vetivety dia nisy avy hatrany ny fanehoan-kevitra tezitra avy amin'ireo mpisera Facebook, ary nitatitra momba ny disadisa ny fampahalalam-baovao antserasera maromaro. Ora vitsy taorian'ny namoahana azy, nanaisotra ny sary tao amin'ny pejiny Facebook ny mpikarakara ny fifaninanana. Na dia izany aza, nanohy ny adihevitra hatrany ireo mpisera media sosialy, ary namerina namoaka ny pikantsary.
Nanombatombana ny mpiserasera sasany fa niezaka naneso ny Nazisma na manao karazana fanambarana momba ilay fanamiana (ankoatra ny fanamafisana ny Reich Fahatelo) ny ray aman-dreny, fa ny ankamaroan'ireo mpaneho hevitra kosa dia naneho ny tsy fankasitrahany ny“portable Adolf”, araka ny niantsoana ny zava-nitranga.
Nisy andiana fifanakalozan-kevitra toy izany koa natao tao amin'ny Twitter, ary misy sasany miezaka manamarina ny fihetsika amin'ny filazana an'i Charlie Chaplin tao amin'ny sarimihetsika 1940 “Ilay Mpanao Didijadona Lehibe”. Na izany aza, matetika iharan'ny fanesoana ny fomba fijery toy izany.
[ho an'ny Fetin'ny Lainga Aprily] matetika miakanjo tahaka ny mahery fon'izy ireo ny ankizy. Ary eny, tsy mampihomehy izany.
Eny tokoa, azoko an-tsaina ny ray aman-dreny nanome ny fitafy ho an'ny ankizy. Saingy tsy azoko an-tsaina hoe ahoana no nanazavan'izy ireo ny akanjo ho azy? “Ry zanaka, Hitler ianao amin'izao, dadatoa namono ny Jiosy satria tsy tiany izy ireo, ry zanako lahy malalako”?
Mahazatra ao Makedonia ny hafatra anti-semitika sy pro-Nazi, izay niala vao haingana teo ambanin'ny fitondrana niha-didy jadona avy amin'ny antoko VMRO-DPMNE. Na dia mandràra ny kabarim-pankahalana aza ny lalàna Makedoniana, niparitaka sy niroborobo malalaka ny asa nataon'i Hitler.
Taorian'ny tantara ratsy momba ny maskarady, nampitandrina momba ity tranga ity ny mpampiasa Twitter sasany:
Etsy ankilany, eo ambonin'ny talantalana ao amin'ny fivarotana lehibe iray, amin'ny fomba milamina tsara, mivarotra boky “Mein Kampf” sy ny “The Jewish Question (Ny Resaka Jiosy)” nosoratan’ tsy-Atoa Hitler izy ireo. Nefa azoko antoka fa hisy olona hiseho hanazava “fa tsy dia mahatsiravina izany, fa mety ho resaka tsy fifanarahana amin'ny fomba fijery sy ny fomba samihafa fotsiny, noho izany dia tsara daholo ny rehetra”.
Andro vitsy lasa izay, manam-pahaizana momba ny zon'olombelona sy mpikatroka Zharko Trajanoski namoaka sary ahitana fantina lohateny nandritra ny “fampiratiana boky” tao amin'ny foibe fivarotana iray hafa, miaraka amin'ny fanehoan-kevitra maneso:
Tolotra “tena mahafinaritra be”. Hitler, Framasao, Illuminati, teorian'ny teti-dratsy sy Putin amin'ny toerana iray.” Sary sy fanehoan-kevitra avy amin'i Zharko Trajanoski, nahazoana alalana.
Mpisera Twitter iray hafa nanondro ny fihatsarambelatsihin'ny olona miampanga ny tranga maskarady Hitler kanefa mampiroborobo ny fanindrahindram-pirenena ihany koa ny tenan'izy ireo, izay raha faritana, mampizarazara ny olona amin'ny hoe “isika” sy “ry zareo” :
Gaga ny rehetra noho ilay ankizy nampiakanjoana mampalahelo toa an'i Hitler. Izay, fantatsika rehetra, fa mpanavakava-bolonkoditra sy Nazi.
Na ireo niantsoantso hoe “Fahafatesana ho an'ny Albaney” [amin'ny fampiasana fanevatevana ara-poko] sy ny “ho an'ny Makedonia madio” eny an-dalambe, izay tena mikasika an'i Hitler avokoa izany.
20 Janoary 2021Kanadà